January 2016 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
စင်္ကာပူမှာ Yakult ဆိုတဲ့ စားသောက်ကုန် တမျိုးရှိပါတယ်။
နို့ချဉ်ဗူးလေးတွေ၊ အအေးဗူးလေးတွေ ထုတ်လုပ်ရောင်းချတာပါ။
ထားပါလေ အဓိက ပြောချင်တာက မဆွေတို့အမေရဲ့ အကြောင်း။
မဆွေက သူ့အမေနဲ့အဖေကို သတိရတာကတစ်ကြောင်း၊ သူကိုယ်တိုင်လည်း ရန်ကုန်မပြန်ဖြစ်တာက တစ်ကြောင်းဆိုတော့ မိဘနှစ်ပါးစလုံးကို စင်္ကာပူအလည် ခေါ်လိုက်တယ်။
ခုပညာရေးလောကမှာခေတ်စားနေတဲ့ ဗျည်းဖြုတ်တဲ့ကိစ္စကို စိတ်ဝင်စားလို့ သေချာ လိုက်လေ့လာ ကြည့်တဲ့အခါ အချက်အလက် တချို့ သိခဲ့ ရပါတယ်။ ဒါလေးကို မျှဝေ ပါရစေ။
ဒီကိစ္စမှာ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ကနေ ဂျပန်နဲ့ ပူးပေါင်း မြှင့်တင် လိုက်တယ် လို့ သိရပါတယ်။ လုံးဝ ဖြုတ်ချလိုက်တာမဟုတ်။ ယခင် သူငယ်တန်း စာတွေကို ယခု သူငယ်တန်းမှာ တစ်ဝက် သင်ပြီး (၁) တန်း မှာ ကျန်တစ်ဝက် ခွဲကာ သင်ကြားမယ့် သဘော ဖြစ်ပါတယ်။
တီတီ အရမ်းကြိုက်တဲ့ ကိုငှက် (ထူးအိမ်သင်)ရဲ့ လေးစားအားကျ ပြီးစံပြပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ထားရှိခဲ့သော မြို့မငြိမ်း ။ ရော့ခ်ကာကြီး အငဲ ကလည်း မြို့မငြိမ်းကိုမှီဖို့ဆိုတာအိမ်မက်ထဲတောင်ထည့်မမက်ရဲပါဘူးဟု ထုတ်ဖေါ်ဝန်ခံခြင်ခံထားရသူ ။ တေးရေး မြင့်မိုးအောင်ကလည်းသူရဲ့လေးစားအားအကိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ မြို့မငြိမ်းပါတဲ့။ ဒါအပြင် မြန်မာလူမျိုးတိုင်း အလွတ်ရနေသော * မြနန္ဒာ* တေးသီချင်းရဲ့ ဖန်တီးရှင် မြို့မငြိမ်း အကြောင်းကို တီတီ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
[၁၉၄၂ ခုနှစ်၊ အီရန်နိုင်ငံ ၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း]
၁၉၄၂ ခုနှစ် အီရန်နိုင်ငံ စစ်မြေပြင်မှာ
ပိုလန်စစ်သားတွေက ဝက်ဝံပေါက်စလေး တစ်ကောင်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ပိုလန် တပ်မဟာ အမှတ် (၂) မှ အမြှောက်တပ်ခွဲ အမှတ် (၂၂) မှာတာဝန်ကျတဲ့စစ်သားတွေပါပဲ။
ခိုကိုးရာမဲ့ဖြစ်နေတဲ့ ဝက်ဝံပေါက်စလေးကို စစ်သားတွေကမွေးထားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ထိုဝက်ဝံလေးကို ပိုလန်ဘာသာ စကားနဲ့ Wojtek လို့အမည် ပေးလိုက်ပါတယ်။
ထိပ်ခပ်နာရောဂါဟာ လူအများအပြားဖြစ်နေကြတဲ့ ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထိပ်ခပ်နာဝေဒနာရှင်များမှ ဆေးနည်းများကို စောနွဲ့ နေဆိုင်(ပူတာအို) သို့ မကြာခဏတောင်းဆိုလာကြပါတယ်။ ဆရာဝန်ကြီးများကိုယ်တိုင် ရေးသားထားတဲ့ ထိပ်ခပ်နာ အကြောင်းများကိုလည်း ညွန်ပေးခဲ့သလို ဆေးရုံးဆေးခန်းများကိုလည်း ညွန်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ညတစ်ညမှာ ယောက်ျားတစ်ယောက် အရက်မူးမူးနဲ့ အိမ်ပြန်ရောက်လာပြီး ပစ္စည်းတွေကို ပစ်ပေါက်ရိုက်ခွဲနေရင်းက အော့အန်ပြီးတော့ ကြမ်းပြင်ပေါ်လဲကျသွားတယ်။
သူ့မိန်းမက သူ့ကို ဆွဲထူပြီး အခန်းထဲပို့ပြီးတဲ့အခါ အန်ဖတ်တွေနဲ့ ရှုပ်ပွနေတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ရှင်းလင်းခဲ့တယ်။
အိမ်တစ်အိမ်ကို ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်လာပြီးအိမ်ထဲမှာ လင်မယားနှစ်
ယောက်ကိုတွေ့ တော့ လင်ဖြစ်သူကို ဧည့်ခန်းထဲကကုလားထိုင်မှာ
ကြိုးတုပ်ထားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ မှ မယားကို အိပ်ခန်းထဲက ကုတင်မှာ
ကြိုးနဲ့ ဆက်တုပ်တယ်။ ဒါကို ဧည့်ခန်းထဲက ယောင်္ကျားလုပ်သူက လှမ်းမြင်နေရပေမယ့်.
သူလည်း ဘာမှမတတ်နိုင်ကြောက်ကြောက်နဲ့အကျဉ်းသားလုပ်သမျှကြည့်သာနေရရှာ
မိန်းမက ဆေးရုံအရေးပေါ်အခန်းထဲက ကုတင်ပေါ်မှာ ပိုက်မျိုးစုံတန်းလန်းနဲ့ မေ့မြောရင်း အသက်က ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုက်ဖြစ်နေရှာတယ်။
စိုးရိမ်ပူပန်နေပုံရတဲ့ ယောက်ျားဖြစ်သူက ဆရာဝန်ကို မေးတယ်... ...
'ဆရာ... သူ့အခြေအနေ ဘယ်လိုရှိပါလဲ'
'ကျနော်တို့လည်း အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကောင်းလာမယ်လို့တော့ အာမမခံနိုင်ဘူး၊ အဆိုးဘက်က ၉၀%၊ အကောင်းဘက်က ၁၀% လောက်ရှိတယ်'
ယမမင်းဆီကို ငရဲသားတယောက် ရောက်လာတယ် ဒါနဲ့ယမမင်းက မေးတယ်
မောင်မင်း ဘာ့ကြောင့် သေတာလည်း
ကွန်တော်မျိုး အံ့သြလွန်ပြီး သေတာပါ
မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကို ပြောပြလို့ ပါ။
Linn Linn Aung
- အဆင်မပြေမှု့တွေ များလာလို့ 
ဘုရားရှင်ရဲ့ မျက်နှာတော်ကို စူးစူးစိုက်စိုက်နဲ့ ဖူးမြင်လိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ
- ချစ်သား အားမငယ် နဲ့ တဲ့ ငါဘုရားရှင်လည်း
အဆဲခံရတာပဲ အစွပ်စွဲခံရတာပဲ လုပ်ကြံခံရတာပဲ
စားစရာအတွက် အခတ်အခဲဖြစ်လို့ 
တဝါလုံးကို ဂျုံ ဆွမ်းနဲ့ ပဲပြီးခဲ့တာပဲ။
ကျွန်တော်တို့အားလုံးကံကောင်းကြပါတယ်။ သင်ဤစာကိုဖတ်နေနိုင်ပါက သင်လည်းကံကောင်းသည့်အထဲတွင်ပါပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာ ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ဦးနှောက်တစ်စုံကို ပိုင်ဆိုင်ထားလို့ပါပဲ။
ဒီဦးနှောက်ကိုအသုံးပြုပြီး ကျွန်တော်တို့ဘ၀တက်လမ်းရှာကြရပါသည်။ ပြဿနာတွေဖြေရှင်းရသည်။ မှတ်သားစရာတွေမှတ်ကြသည်။
Zin Myo Aung‎ to ရသစုံ စာပေပျိုးခင်း
ဆေးသောက်လျှင် ရေနှင့်သောက်သည်ကို မသိသူမရှိပေ။
သို့သော် ဤလွယ်ကူ၍ အရေးကြီးသော ကွင်းဆက်ကို လူတို့မေ့လျော့သည့်အတွက် ဆေးအာနိသင် ရသင့်သလောက် မရသည့်အပြင် အစာမျိုပြွန်ကို ထိခိုက်နိုင်သည်။
.ဆေးပြားသည် သာမန်အားဖြင့် အဓိကဆေးမှုန့်နှင့် ပုံသွင်းမှုန့် (ကော်မှုန့်၊ သကြား စသည်) တို့ကို ဖိ၍ ပုံသွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
1.Bag = လွယ်အိပ်
Gage = အပေါင်ခံပစ္စည်း
Baggage = ကလက်သောမိန်းမ
2.Tooth = သွား
Paste = ကျောက်မျက်အတု
Tooth paste = သွားတိုက်ဆေးဗူး
1. မမင်းအိမ်နဲ့ အင်္ဂလိပ်စကား
မမင်းအိမ်တစ်ယောက် အိမ်မှာ အားနေတော့ အင်္ဂလိပ်စကားပြော လေ့ကျင့်နေတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ ကိုဖိုးသန် အလုပ်ကပြန်လာတယ်။
သူတတ်သလောက်မှတ်သလောက်နဲ့ ဖမ်းနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်... ...
'Welcome home darling'... လို့။
Author: lubo601 | 2:30 PM | No မှတ်ချက် |
Author: lubo601 | 2:17 PM | No မှတ်ချက် |
၎င်းဆေး ဖော်စပ်ဖို့အတွက် လိုအပ်သော ဆေးဝါးကတော့ သင်္ဘောရွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသင်္ဘောရွက်ကို ငရုပ်ဆုံနဲ့ ထောင်းလိုက်ပြီး (သို့မဟုတ်) ကျောက်ပြင်ပေါ်တွင် အရွက်များကို ကြေညက်အောင် ကျိတ်ခြေပြီး ထွက်ရှိလာသော အရည်များကို သွေးလွန် တုပ်ကွေး ဖြစ်နေသော လူနာအား တိုက်ပေး လိုက်ပါ။
" Zika virus မြန်မာနိုင်ငံကိုကူးစက်လာနိုင်၍ ကျန်းမာရေးဌာန သတိပေး "
သွေးလွန်တုပ်ကွေးနှင့် တူသည့် Zika virus သည် မြောက်အမေရိကနှင့် တောင်အမေရိက၊ ထိုင်း၊ ထိုင်ဝမ်၊ ဘရာဇီး စသည့် နိုင်ငံ အများအပြားတွင် ဖြစ်ပွားနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ အလျှင်အမြန် ကူးစက်လာနိုင်သဖြင့် ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် ဂရုစိုက်သင့်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ယင်းဗိုင်းရပ်စ်သည် သွေးလွန်တုပ်ကွေးကဲ့သို့ အေးဒီစ်ခြင်ကျားမှတဆင့် ကူးစက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး တုပ်ကွေးရောဂါလက္ခဏာများနှင့် တူညီကြောင်း၊
အိုးအိမ် မဲ့ လမ်းဘေး ဘဝ မှ ဟားရ်ဗားဒ် Harvard တက္ကသိုလ် သို့
- Liz Murray အား (New York) နယူးယောက် ပြည်နယ် ဘရော်းစ် (Bronx) မြို့ တွင် ၁၉၈၀ ၌ မွေဖွားခဲ့ သည်။
သူမ ၏ မိဘများမှာ ဆေး၊ ဘိမ်း စွဲသူများ ဖြစ်ပြီး မိသားစု အတွက် ထောက်ပံ့ မည့် အစား ရသမျှ မရှိစလောက်သော ဝင်ငွေ များကို သူတို့ခဏသာ စိတ်ဖြေ ရာ အဖြစ်သာ အသုံးပြုသည်။
လိဇ် (Liz) နဲ့ သူမ၏ အမ (Lisa) တို့ နှစ်ဦးမှာ အစာငတ် ပျက် တစ်လှည့်အသက်ကို ကြုံရာ ဆက်နေရရှာသည်။
အင်္ဂလိပ်-မြန်မာအဘိဓာန် - ရွှေအိမ်စည်
မိုက်ခရိုဆော့ ပိုင်ရှင်ဘီလ်ဂိတ် ပေးသော အကြံဥာဏ် ( ၁၁) ခု
(၂)ဒီလောကကကိုယ့်လေးစားကြည်ညိုမှုကိုအသိအမှတ်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။ အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအရင်လုပ် ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုဆန်းစစ်ဖို့ လောကကြီးကပိုမျှော်လင့်တယ်။
(၃) ကျောင်းကနေခွါတာနဲ့လခကောင်းမရနိုင်ဘူး။ချက်ချင်းဟမ်းဖုန်းချိတ်ထားတဲ့ကွပ်ကဲသူမဖြစ်နိုင်ဘူး ။နှစ်ခုစလုံးအတွက်ကြိုးပမ်း အားထုတ်မှရနိုင်တယ်။
Author: lubo601 | 3:25 PM | No မှတ်ချက် |
အမေရိကန်သမ္မတကို အနီးကပ် ဓါးနဲ့လုပ်ကြံခံရမယ်လို့ သတင်းထွက်နေတဲ့အတွက် ဓါးရေးကျွမ်းကျင်တဲ့ ကိုယ်ရံတော်တစ်ယောက် ရှာဖွေနေပါတယ်။
လာရောက်လျှောက်ထားသူများစွာထဲက အဆင့်ဆင့်ရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါ နောက်ဆုံးဇကာတင် သုံးယောက်ကျန်ခဲ့တယ်။
ဆရာရှင့် သမီးကလေးမွေးပြီးတာ ၅ ရက်ရပါပြီ။ အိမ်ကအဖွားက ငါးကြော်ကြက်ကြော်ပဲကျွေးတယ်။ ကလေးအာဟာရ အစုံဘူးထင်လို့ပါ။ နို့တိုက်မိခင်ကဘာတွေစားသင့်သလဲ ဆရာတင်ပေးပါနော်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာရှင့်။
နို့တိုက်တာကို မွေးပြီး အစောဆုံး (၂-၃ နာရီ အတွင်း) တိုက်သင့်တယ်။ အဖြူရောင်နို့ရည် မထွက်သေးလည်း တိုက်ပါ။ ရောဂါကို ခံနိုင်တဲ့ (အင်တီဘော်ဒီ) တွေပါတယ်။ နို့သိပ်တင်းလာမှာကို ကာကွယ်ရာလည်း ကျတယ်။ ကလေးကိုလည်း နို့တွေ သိပ်မများခင် အစို့သင်ရာလည်း ရောက်တယ်။
Author: lubo601 | 3:11 PM | No မှတ်ချက် |
ပြာသိုလမှာ တရားပွဲစီစဉ်သူများက “အမေနေ့”
အထူးတရားပွဲဆိုပြီး သတ်မှတ်ကာ ပင့်ကြတယ်။
ဆရာကြီးဦးသုခက ပြာသိုလပြည့်နေ့ကို အမေနေ့ရယ်လို့
ပြောပြီး ဟောပြောပွဲတွေနဲ့ လမ်းဖောက်ခဲ့လို့
အခြေအနေတွေ အသွင်ကူးပြောင်းတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မူဝါဒတွေကို..
Author: lubo601 | 2:51 PM | No မှတ်ချက် |
ဇာခြင်ထောင် အပါးလေး ဖုံးအုပ်ထားပါ
အ မွှေးတိုင်များ လှိုင်နေ အောင် ထွန်းထားပါ
မိတ်ဆွေ သင်္ဂဟများ လာရောက်ကြည့်ရှုကြပါ
၁။ ဟင်းနုနွယ်ရွက် (Spinach)
ချက်ပြီးသား ဟင်းနုနွယ်ရွက်ကို ပြန်နွှေးပြီးမစားသင့်ပါဘူး။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဟင်းနုနွယ်ရွက်ထဲမှာပါတဲ့ နိုက်ထရိတ်(nitrates)
ဓာတ်ဆားကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ချက်ထားတဲ့ဟင်းနုနွယ်ရွက်ကို နွှေးလိုက်တဲ့အခါမှာ နိုက်ထရိတ် ဓာတ်ဆားကနေ နိုင်ထရစ် အက်စစ် အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီး အဲ့ဒီ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ နိုင်ထရစ်အက်စစ်ဟာ ကင်ဆာ ရောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Author: lubo601 | 2:43 PM | No မှတ်ချက် |
အမေရိကန်နိုင်ငံသူ ဂျင်းဒစ်ကဆင်ဆိုတာ
သမ္ဗတကြီး ရုစဘဲ့ကိုယ်တိုင် တန်ဘိုးထား
မှန်လွန်းလို့ တကမ္ဘာလုံးက ဗေဒင်ပညာရှင်တွေ
“ကျနော်က ပျားရည်အစစ်ပဲ ရောင်းတယ်”
“ခင်ဗျား ပျားရည်ကို စစ်မစစ် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ”
“ခွေးတစ်ကောင်ကို ကျွေးကြည့်လိုက်၊ ခွေးမလျက်ရင် ပျားရည်အစစ်”
လူမှုဘ၀ကို ဖြတ်သန်းတဲ့ အခါမှာ လူတိုင်းမှာ အမူအကျင့်ကောင်းလေးတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းသွားဖို့ လိုပါတယ်။ အမူအကျင့်ဆိုတာကတော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အပြုအမှုနဲ့ အကျင့်စရိုက်ပါပဲ။
အမူအကျင့်ကောင်းဖို့ ဆိုတာ လွယ်လွယ်နဲ့ ဖြစ်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မိဘ၊ဆရာ၊မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုတဲ့ အခြေနေတွေမှာ အမူအကျင့်ကောင်းတွေဖြစ်လာတာပါ။ တဆက်တည်းမှာပဲ မကောင်းတဲ့ အမူအကျင့်တွေကိုလည်း ရသွားတတ်ပါတယ်။
ကိုယ့် အရည်အသွေးမျိုး သူများကို မရစေချင်တာ၊
ကိုယ့် အခြေအနေမျိုး သူများ မရစေချင်တာ၊
ကိုယ်နဲ့ လာယှဉ်ပြိုင်လာမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အရည်အသွေးမျိုးကို ကိုယ်ပဲ ပိုင်ဆိုင်ထားချင်တယ်၊
ဒါ မစ္ဆရိယ လို့ ခေါ်တယ်။